१८ वर्ष पर्वतको जन प्रतिनिधि बनेका अर्जुन जोशीलाई पर्वतका एक युवाले लेखे यस्तो मार्मिक पत्र : जिल्लाका लाखौ युवालाई बिदेश जानबाट रोक्न तपाइको पहल के भयो ? खुला पत्र सहित : – Setosurya
मेरो प्यारो दाई अर्जुन प्रसाद जोशी ज्यू नमस्कार ! सुन्दै छू यसपालीको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि उमेरद्वारी दर्ता गराउनु भयो रे! सायद तपाईलाई त कुनै नौलो कुरा भएन होला किनकी पटक पटक उमेरद्वारी दर्ता मात्र होईन चुनावनै जितेको मान्छे पर्नु भयो ।
तर सोध्न मन लाग्छ पटक पटक जितेर के गर्नु भयो ? तपाईले पहिलो पटक चुनाव जित्दा मलाई राजनीतिको ‘र’ पनि थाहा थिएन । मात्र की घर र बाटोका भित्ताहरूमा “युवा नेता अर्जुन प्रसाद जोशीलाई जिताऔ” लेखेको पोस्टर चाहि पढ़ेको याद छ । जुन कुरा अहिले सामाजिक संजाल तथा मिडियाका भित्ताहरूमा देख्दै छु ।
होईन दाई, तपाईले जिÞल्लाको विकास केही गर्न नपर्ने चुनाव बाहेक अरु समय गाऊँ जानु पनि नपर्ने सधैको युवा नेता चाहि कैले सम्म हुने तपाई ?? तपाई आफैलाई पनि अचम्म लाग्दैन ? मलाई त अचम्म लाग्छ जनताले आखिर तपाईलाई अहिले सम्म किन जिताई राख्नु भएको छ ? दाई आज म तपाईबाट जान्न चाहन्छु हामी जस्ता जिल्लाका लाखौ युवालाई बिदेश जानबाट रोक्न तपाइको पहल के भयो ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु भयो ? तपाईले जिते पछि जिल्लामा कति किलोमिटर बाटो कालो पत्रे गर्नु भो ? हुनत हजुरले सोच्नु भएहोला चुनाब जित्न विकास गर्न पर्दैन सचेत युवा विदेश छन् गाउका सोझासाझा लाइ २–४ पैसा सहित खोक्रो बिकास को भासण गरे भइहाल्छ नी । अनि आफ्ना आसे पासेलाई विचरा गरीब निमुखालाई भट्टी तिर जम्मा गर्न लगाई भोज खुवाउदै नोट संग भोट साट्ने धुनमा पनि हुनुहुन्छ होला ।
तर दाई हेक्का होस् अब सबै जनता तपाइले सोचे जस्तो दरिद्र मानसिकताबाट माथि उठिसकेका छन । जनताले बुझिसकेका छन् तपाइको झुटको खेती, दाई जनता तपाईले दिने १ बोरा चामल एउटा बिलो मासु र भट्टीको रक्सी मा हैन ति सबै कुरा ३६५ दिन आफुले कसरी कमाउन सकिन्छ त्यसको खोजीमा छन ।
दाइ जनताले बुझिसकेका छन् त्यो तपाईबाट सम्भब छैन, दाइ अर्को कुरा पहिले जस्तै हजुरले सरकार को आडमा टोले मुन्द्रे प्रयोग गरी बुथ कब्जा गरी चुनाब जित्ने दिवा सपना देख्नु भएको हो भने पनि होशियार रहे हुन्छ । जनता लौरा भाटा आँसी खुकुरी लिएर प्रतिकार गर्नेछन । दाइ पहिलो र दोश्रो संबिधान सभाको चुनाबको साँची म पनि हुँ । दाइ जबाफ दिनुहोस । कुन गाऊँ कुन टोलमा तपाईले के गर्नु भयो ? सधै भरी बस्ताबिक पिडितलाई नदिई खानेपानी कार्यालयका पाइप र भू–संरक्षण कार्यालयका जाली पार्टीका झोले कार्यकर्तालाई बाढेर मैले यो गरे मैले त्यो गरे भन्दै चुनावी भाषण ठोकदै गाऊँ छिर्ने छूट तपाई लाई अब जनताले दिने छैनन् ।
पटक पटक सम्म केन्द्रमा पावर लगाई तपाईको उमेरद्वारीले तपाईको पार्टी भित्रका जिम्मेदारीपूर्ण पदमा बसेका नेता कार्यकर्ता पनि असंतुष्ट छन । जुन कुरा तपाई बिरूद्वको बागी उमेरद्वारीले प्रस्ट्र पारेको छ । जबाफ दिनुहोस दाई के कांग्रेस हजुरको मात्र बिर्ता हो ? तपाइलाई पार्टी भित्र एकलौटि अधिनायकबाद लाद्ने छुट कसले प्रदान गर्यो ?
दाई जबाफ दिनुहोस पार्टी भित्रका सोझा, त्यागी ईमान्दार कार्यकर्ताहरुको भबिष्य के ? लोकतांत्रिक पार्टी भित्र बसेर अझै कति पावर र पहुँचको भरमा अधिनायकबाद लाद्नु हुन्छ ? प्यारो दाई अब जनता शिक्षित भएका छन् । पैले जस्तो झूटो आश्वासनले चुनाव जित्न असम्भव छ । तेसैले तीन पटक सम्म चुनाव जितेर ह्याट्रिक गरेको तपाईको राजनीतिक ऊँचाई कायम राखÞ्ने हो भने अहिलेको प्रतिनिधि सभाको उमेरद्वारी फिर्ता लिइ, जनता संग माफी मागी एउटा राजनीतिक आभिभाबक बनि बस्नु भन्दा बाहेक अरु तपाइको कुनै विकल्प छैन । सुबास खड्का, पर्वत हाल : जापान
पर्वत कांग्रेसमा पहिरो, एकै दिनमा पाँच सय बढी कांग्रेसी कार्यकर्ता वाम गठबन्धनमा प्रवेश !
स्कुलबाट ५ बर्षे बालक अपहरण गर्ने मुख्य योजनाकार प्रहरीको ‘लेन्स’भित्र
एमालेको कलष्टर ८ को भेला रानीपानीमा सम्पन्न
पर्वतका सांसद पदम गिरी भन्छन्-‘विहादी र पैयू क्षेत्रको सडककालोपत्रे पहिलो प्राथमिकता’
व्यंग्य: सय दिन कटाएका देउवाले भने–डेढसय हुनुपर्थ्यो, बल्ल ५४ जना मात्र भए मन्त्री
भोली विशाल अभियानका साथ पूर्वबाट उदाउँदै एमाले
पर्वतमा गृहमन्त्री निधीलाई २१ किलोको माला